Irraantoowwanii, yeroo ati galmicha teessumaa maxxansaa keessatti daawwattu qofa (Mul'annoo - Teessumaa Maxxansaa aangeessi) mul'atu.
Mallattoon filannoo tokko, fuuldura akkaataawwan fuula warra irraantoo qabanitti mul'ifama.
Irraantoo tokko haquudhaaf, Saagi - Irraantoo filiitii, ittaansuudhaan akkataa fuulaa isa irraantoo qabu filadhu. Irraantoochii, fuulawwan warra akkaataa fuulaa kana fayyadaman hunduma irraa ni haqamu.
Irraantoowwan, akkaataawwan fuulaa warra galmicha keessatti fayyadaa jiran hunda, irraantoowwan, itti ida'uuf yk irraa haquudhaaf, Saagi - Irraantoo - Mara fili.
Irraantoo tokko dhangeessuuf, Dhangi'i - Fuula - Irraantoo filadhu.